समाचार - डुअल एक्शन पालिशर र रोटरी पालिसरको बीचमा के भिन्नता छ
डुअल एक्शन पालिशर र रोटरी पालिसरको बीचमा के भिन्नता छ?
जब मेशिन पालिशर छनौटको कुरा आउँदछ, हाम्रा ग्राहकहरूले हामीलाई सोधेको प्रश्नहरूमध्ये एक हो: "डुअल-एक्शन पालिशर र रोटरी पालिसरमा के भिन्नता छ?" यो एक धेरै राम्रो प्रश्न हो र यिनीहरूले केवल मेशिन पालिशरको साथ सुरूवात गर्दा, उत्तर एकदम महत्त्वपूर्ण छ!
रोटरी पालिसर यसको कक्षामा सब भन्दा पुरानो हो, नयाँ ड्युअल-एक्शनबाट बाहिर आउनु अघि हामीसँग यस किसिमको पालिशेर मात्र थियो। रोटरी पालिसरहरू धेरै सिधा छन् - टाउकोले केवल एक मात्र तरिकामा घुमाउँछ जसरी तपाईंले यसलाई आफ्नो कार पेंटमा कति प्रेस गर्नुभयो, यसले छनौट गरेको गतिमा स्पिन गर्न जारी राख्नेछ। यसले स्थिर कक्षामा घुमाउँदछ, अधिक आक्रमक कटौती सिर्जना गर्दछ तर अधिक तातो उत्पन्न गर्दछ। एक घुमाउने पालिसरले तपाईंलाई अधिक अनुभव लिन आवश्यक पर्दछ, तपाईले पालिसर म्यानुअल रूपमा सार्नु पर्छ र पेन्टमा मेशिन कति सार्न कति छिटो तपाईले जान्नु पर्छ। घुमाउने पालिसर अधिक आक्रामक छ, त्यसैले यसले गहिरा स्क्र्याचहरू र पेंट अपूर्णताहरू सच्याउनेछ, यदि सही रूपमा प्रयोग गरेमा मात्र।
डुअल एक्शन पालिशर (वा डीए पालिशर जस्तो कि यो सामान्य रूपमा छोटो पारिन्छ) एक क्रान्तिकारी सिर्जना थियो। यसले २ बिभिन्न तरीकाले घुमाउँदछ: टाउकोले एका धुराँको गोलाकार कार्यमा घुमाउँछ जुन फलस्वरूप व्यापक परिभ्रमण गतिमा घुम्दछ, त्यसैले तातो ठूलो क्षेत्रमा वितरण गर्दछ, बढी तातो र घर्षण निर्माणलाई रोक्दछ, यसले धेरै सुरक्षित बनाउँछ। तपाईंको कारमा। नतिजाको रूपमा, तपाइँ यस पालिशरलाई एकल स्थानमा घुमाउन र तपाइँको पेन्ट जलाउन रोक्न सक्षम हुनुहुन्छ। यसले कारलाई 'टिप शीर्ष' खोजिरहेको देख्ने शौकिया उत्साहीको लागि डीएलाई उत्तम छनोट गर्दछ तर सम्भावित पुनः स्प्रेको चिन्ता बिना!